यहीँ जिउँदै जलाए बुवालाई | Wagle Street Journal
यहीँ जिउँदै जलाए बुवालाई
बडापानी (मेघालय)- बलराम शर्मालाई जेठ ३ को त्यो भयानक क्षण सम्झँदा सपनाजस्तो लाग्छ । ‘यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ मेरो बुवालाई जिउँदै जलाएर मारियो,’ पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालयको राजधानी सिलाङनजिकैको बडापानी गाउँका यी ४१ वर्षे गोठालाले आँखाभरि आँसु निकाल्दै भने ।
त्यो बिहानको रात गोठमा बलरामसँगै सुतिरहेका उनका पिता ७१ वर्षे लोकनाथ बास्तोलालाई एक हूल मान्छे आई जिउँदै जलाएर मारेका थिए । गोठमा शर्माकी पत्नी, उनीहरूका १५ (नारायण), १२ (जीवन) र १० (तुलसी) वर्षका छोराहरू र छोरी पनि थिए । दुई बजेतिर अचानक एक हूल आएर गोठमा आगो लगाइदिएपछि शर्मा स्तब्ध भएका थिए ।
‘हतारहतार बच्चाहरू र बुवालाई बाहिर निकालेँ,’ उनले भने, ‘हात जोडेर माफी माग्दै थिएँ, केही नगर्न भन्दै थिएँ, एउटाले खासी भाषामा ‘मार्दे’ भनिहाल्यो । अर्कोले यतिलामो (उनले फैलाइएको दाहिने हातको कुममा देब्रे हत्केलो लगे) खुकुरी निकाल्यो । अनि म यस्तरी (उनले दुवै हात उचालेर पछाडितिर फाले) जम्प हान्दै भागेँ केटाकेटीतिर । उनीहरूलाई लगेर त्यहाँ (५० मिटरजति टाढाको खोल्सोमा) लुकेँ ।’ भाग्न नसकेका वृद्ध लोकनाथलाई पेट्रोल खन्याएर, खुकुरीले हानेर मारेको शर्माले बताए ।
घटनामा ४ गाई मरे, जसलाई जलेको गोठैअगाडि गाडिएको छ । कान्तिपुरले भेट्दा बुवाको काजक्रिया सकेका शर्मा गोठबाट हिँडेर आधा घन्टा टाढाको एउटा नेपालीभाषी स्कुलमा थिए जहाँ उनको ठूलो छोरा पढ्छन् । ‘बच्चाका किताब, कपडा जले,’ उनले भने, ‘छोरालाई पढाउनु त परिहाल्यो, सरहरूले केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भनेर आएको ।’ असम राज्यसँगको विवादित सिमाना लाम्पीका गोर्खालाई वैशाख ३१ मा हटाउन जाने आदिवासी खासीमध्ये चारलाई असाम सीमा रक्षाबलले गोली हानी मारेपछि मेघालयका गोर्खा र कोइलाखानी क्षेत्रमा केन्दि्रत नेपालीलाई आक्रमण गर्ने क्रममा खासीहरूले बास्तोलालाई मारेका हुन् ।
जयन्तिया हिल्स जिल्लाका कोइलाखानीका केही नेपाली मजदुरको पनि हत्या भएको त्यहाँका सक्रिय नेपालीहरूले बताएका छन्, जसलाई मेघालय सरकारले अस्वीकार गरेको छ । मारिएका भनिएकाको परिचय सार्वजनिक भएको छैन तर नेपालीहरूले केही शव लुकाइएको आरोप लगाएका छन् ।
‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ मेघालयका मुख्यमन्त्री मुकुल सामाले बुधबार सिलाङमा कान्तिपुरसँग भने, ‘यो हल्लाको पछि लाग्ने समय होइन । अनुसन्धान रिपोर्ट आएपछि सबै तथ्य थाहा हुन्छ ।’
नेपालबाट कोइलाखानीमा काम गर्न आउने कामदारको दर्ता र बिमा नहुने गरेकाले तिनीहरूको पहिचान पत्तै लागे पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन हुने नेपाली संगठनका कार्यकर्ताहरूले बताए । बास्तोलाका परिवारलाई मेघालय सरकारले लाम्पीमा मर्ने खासीहरूलाई तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने मुख्यमन्त्री साङमाले बताए ।
घटना भएको दुई सातामा पनि सिलाङबाट गोर्खा समुदायका कुनै व्यक्ति आफ्नो अवस्था बुझ्न नआइदिँदा दुःख लागेको शर्माले बताए । सिलाङका कतिपय सक्रिय गोर्खाले त्यता जाँदा खासीहरूको तारो बनिने हुँदा डर लागेको उल्लेख गरे । नेपाली नागरिकता नभएको, बुवासहित आफ्नो जन्म पनि मेघालयमै भएको तर राज्यमा आफ्नो नाममा जग्गा नभएको शर्माले बताए । उनी अरू थुप्रै नेपालीभाषीले झैं खासीहरूको जग्गा भाडामा लिएर बस्ने गरेका छन् । भाडा भन्नुमात्र हो, वर्षमा त्यो दुई सयदेखि पाँच सयको हाराहारीमा हुन्छ तर खास काम त्यहाँ बसेर त्यो जग्गाको स्याहार सुसार गर्ने नै हो । त्यो रात बास्तोला गोठमा जल्दा उनकी पत्नी, अर्का छोरा र बुहारी त्यहाँबाट एक घन्टा उकालो हिँडेर पुगिने ठाउँमा बनेको सानो घरमा थिए ।
‘हामीलाई १९८६, ८७ को गन्डागोलमा पनि केही गरेनन्,’ शर्माले भने, ‘तर यसपालि अचानक, केही नभनी आएर त्यस्तो गरे ।’
उनकी पत्नी नजिकैको प्लाई कारखानामा ज्यामी गर्थिन्, उनी गाईको स्याहार गर्थे । अहिले शर्मा जलेको गोठमुनि उही मालिकको कुखुरा फार्ममा बसेका छन् । मालिकले उनलाई केही समय त्यहीं बस्न भनेको छ । गोठसँगै जोडेर उनी काठको एउटा सानो घर बनाउँदै थिए ‘तख्ता भएको,’ जसको ‘ढोकामात्र हाल्न बाँकी थियो,’ उनले बताए ।
‘इष्टमित्र र ठूला मान्छे आएको बेला मज्जाले बस्न मिल्ने ठाउँ पनि बनाएको थिएँ,’ शर्माले भने, ‘अब त्यो कुखुरा गोठमा मैले पाहुना कसरी राख्नु ?’
This entry was posted in नेपाल-भारत सम्बन्ध, भारतीय समाज and tagged नेपाल, नेपाली, भारत, भारतीय समाज, मेघालय on June 4, 2010 by Dinesh Wagle.
← कोइलाखानीको जिन्दगानी खटपटमा छन् गोर्खा र प्रवासी →
2 thoughts on “यहीँ जिउँदै जलाए बुवालाई”
Pingback: Khasi Nepali Ethnic Conflict in Meghalaya, India « United We Blog! foraDemocratic Nepal
Jay Dev Khatri April 2, 2013 at 5:00 pm
यस्ता घटना हरु त यहाँ दिनहु घटिरहेका छन् सम्बन्धित नेपाली तथा गोर्खा समुदाय संघ सस्था ले
ध्यान पुरयाई कारबाही गर्न सके हामी गोर्खाली को सिर झुक्ने थिएन कि ? हामी ले यिनीहरुको अगाडी
निर्धक्क भएर हिड्न सकिने थियो कि ?